मत्ती २७ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद
२७ बिहान भएपछि सबै मुख्य पुजारीहरू अनि धर्म-गुरुहरूले येशूलाई कसरी मार्ने भनेर आपसमा सल्लाह गरे। २ अनि तिनीहरूले उहाँलाई बाँधेर लगे अनि राज्यपाल पिलातसलाई सुम्पे। ३ तब उहाँलाई धोका दिने यहूदा उहाँलाई मृत्युदण्ड दिएको देखेर पछुताए र आफूले लिएको तीस टुक्रा चाँदी मुख्य पुजारीहरू र धर्म-गुरुहरूलाई फर्काउँदै ४ यसो भने: “परमेश्वरको स्तरबमोजिम असल काम गर्ने मानिसलाई धोका दिएर मैले पाप गरें।” तर तिनीहरूले यसो भने: “हामीलाई के मतलब? तिम्रो कुरा तिमी आफै जान!” ५ तब चाँदीको टुक्रा मन्दिरमा फ्याँकेर तिनी गए अनि झुन्डिएर मरे। ६ अनि मुख्य पुजारीहरूले चाँदीको टुक्रा टिपे र भने: “यसलाई पवित्र ढुकुटीमा खसाल्नु उचित हुँदैन, किनकि यो रगतको मोल हो।” ७ आपसमा सल्लाह गरेपछि, परदेशीहरूको लास गाड्न तिनीहरूले त्यो पैसाले कुमालेको जमिन किने। ८ त्यसैले आजको दिनसम्मै त्यस जमिनलाई “रगतको जमिन” भनिन्छ। ९ यसरी भविष्यवक्ता यर्मियाद्वारा भनिएको यो वचन पूरा भयो: “अनि तिनीहरूले तीस टुक्रा चाँदी लिए। किनकि इस्राएलका केही सन्तानले उनको लागि त्यति नै मोल तोकेका थिए १० र यहोवाले मलाई आज्ञा गर्नुभएबमोजिम तिनीहरूले त्यो पैसा कुमालेको जमिनका लागि दिए।” ११ येशू अब राज्यपालसामु उभिनुभयो र तिनले उहाँलाई प्रश्न गरे: “के तिमी यहूदीहरूका राजा हौ?” येशूले जवाफ दिनुभयो: “तपाईं आफैले भन्नुभयो।” १२ तर मुख्य पुजारीहरू अनि धर्म-गुरुहरूले एकपछि अर्को आरोप लगाउँदा उहाँले केही जवाफ दिनुभएन। १३ तब पिलातसले उहाँलाई भने: “यिनीहरू तिमीलाई के-के आरोप लगाउँदैछन्‌, के तिमीले सुनेनौ?” १४ तर उहाँले केही जवाफ दिनुभएन। अहँ, उहाँले एक शब्द बोल्नुभएन। यो देखेर राज्यपाल तीनछक परे। १५ हरेक वर्ष चाडको बेला भीडको इच्छाअनुसार कुनै एक कैदीलाई मुक्त गर्ने राज्यपालको चलन थियो। १६ त्यतिखेर बरब्बा नाम गरेको कुख्यात कैदी थुनामा थियो। १७ त्यसैले तिनीहरू भेला भएको बेला पिलातसले तिनीहरूलाई सोधे: “तिमीहरू के चाहन्छौ, म बरब्बालाई मुक्त गरिदिउँ कि ख्रीष्ट भन्ने येशूलाई?” १८ किनकि ईर्ष्याले जलेर तिनीहरूले उहाँलाई सुम्पेका हुन्‌ भनेर तिनलाई थाह थियो। १९ यसबाहेक, न्यायआसनमा बसिरहेको बेला तिनकी पत्नीले यस्तो खबर पठाएकी थिइन्‌: “परमेश्वरको स्तरबमोजिम असल काम गर्ने त्यस मानिसलाई केही नगर्नुहोस्। किनकि उसले गर्दा आज मैले डरलाग्दो सपना देखें।” २० तर मुख्य पुजारीहरू र धर्म-गुरुहरूले बरब्बालाई छोडिदिने र येशूलाई चाहिं मार्ने माग गर्न भीडलाई उक्साए। २१ तब तिनीहरूको माग सुनेपछि राज्यपालले तिनीहरूलाई फेरि एकचोटि सोधे: “मैले यी दुईमध्ये कसलाई मुक्त गरेको तिमीहरू चाहन्छौ?” तिनीहरूले जवाफ दिए: “बरब्बालाई।” २२ पिलातसले तिनीहरूलाई भने: “त्यसोभए, ख्रीष्ट भन्ने यस येशूलाई म के गरूँ त?” तिनीहरू सबैले जवाफ दिए: “त्यो मानिस खम्बामा टाँगिओस्!” २३ तिनले भने: “किन? उसले के खराबी गऱ्यो र?” तर तिनीहरू यसो भन्दै झन्‌ चिच्याउन थाले: “त्यो मानिस खम्बामा टाँगिओस्!” २४ आफ्नो कोसिस सफल हुनुको सट्टा भीड उत्तेजित हुन थालेको देखेर पिलातसले पानी लिए र भीडले देख्ने गरी आफ्नो हात धुँदै यसो भने: “म यस मानिसको रगतको दोषबाट मुक्त छु। यसको जिम्मेवार अब तिमीहरू नै हौ।” २५ अनि तिनको कुरा सुनेर सबै मानिसहरूले यसो भने: “त्यसको रगतको दोष हामी र हाम्रा सन्तानमाथि आइपरोस्।” २६ त्यसपछि तिनले बरब्बालाई मुक्त गरे तर येशूलाई भने कोर्रा लगाउने आदेश दिए अनि खम्बामा टाँग्न तिनीहरूको हातमा सुम्पे। २७ तब राज्यपालका सिपाहीहरूले येशूलाई राज्यपालको महलमा लगे र सेनाको पूरै टुकडी बोलाएर उहाँलाई घेरा हाल्न लगाए। २८ अनि उहाँको लुगा फुकालिदिएर तिनीहरूले उहाँलाई चहकिलो रातो रङ्गको अलखा लगाइदिए २९ अनि काँडाको मुकुट गुथेर उहाँको शिरमा पहिराइदिए र उहाँको दाहिने हातमा नर्कट थमाइदिए। त्यसपछि उहाँसामु घुँडा टेकेर तिनीहरूले यसो भन्दै उहाँलाई गिज्याए: “हे यहूदीहरूका राजा, प्रणाम!” ३० तिनीहरूले उहाँलाई थुके अनि नर्कट खोसेर उहाँको शिरमा हिर्काउन थाले। ३१ उहाँलाई गिज्याउनुसम्म गिज्याएपछि अन्तमा तिनीहरूले उहाँको अलखा फुकालेर उहाँको आफ्नै लुगा लगाइदिए अनि उहाँलाई खम्बामा टाँग्न लगे। ३२ बाटोमा जाँदै गर्दा तिनीहरूले सिमोन नाम गरेको साइरेनीवासीलाई भेटे। उहाँको यातनाको खम्बा* बोकाउन तिनीहरूले उसलाई अनिवार्य सेवामा लगाए। ३३ त्यसपछि तिनीहरू गलगथा भन्ने ठाउँमा पुगे, जसको अर्थ हो, खप्पर। ३४ अनि तिनीहरूले उहाँलाई तीतो* मिसाइएको दाखमद्य पिउन दिए। तर चाखेपछि उहाँले पिउन मान्नुभएन। ३५ उहाँलाई खम्बामा टाँगिसकेपछि तिनीहरूले गोला हालेर उहाँको लुगा आपसमा बाँडे। ३६ अनि त्यहीं बसेर तिनीहरूले उहाँलाई पहरा दिए। ३७ साथै, तिनीहरूले एउटा पाटीमा “यो यहूदीहरूको राजा येशू हो” भन्ने अभियोग लेखेर उहाँको शिरमास्तिर राखे। ३८ त्यतिखेर, उहाँसँगै दुई जना डाँकुलाई पनि खम्बामा टाँगिएको थियो, एक जनालाई उहाँको दाहिनेपट्टि र अर्कोलाई देब्रेपट्टि। ३९ त्यसैले बटुवाहरूले आफ्नो मुन्टो हल्लाएर खिसी गर्दै ४० यसो भने: “मन्दिर भत्काएर तीन दिनमा बनाउँछु भनेर तँ खुब फुइँ लगाउँथिस् हैन, लौ आफैलाई बचाएर देखा! तँ परमेश्वरको छोरा होस् भने यातनाको खम्बाबाट ओर्लेर आइज!” ४१ त्यसैगरि मुख्य पुजारीहरूका साथै शास्त्रीहरू अनि धर्म-गुरुहरूले पनि यसो भन्दै उहाँको ठट्टा गरे: ४२ “यसले अरूलाई त बचायो तर आफैलाई भने बचाउन सकेन। यो त इस्राएलको राजा हो नि; यो अब यातनाको खम्बाबाट ओर्लेर आओस्, त्यसपछि हामी यसलाई पत्याउँला। ४३ यसले परमेश्वरमाथि भरोसा राखेको छ, अब चाहनुहुन्छ भने उहाँले नै यसलाई बचाऊन्‌, किनकि यसले ‘म परमेश्वरको छोरा हुँ’ भन्थ्यो।” ४४ उहाँसँगै खम्बामा टाँगिएका डाँकुहरूले समेत उहाँलाई त्यसैगरि गिल्ला गर्न थाले। ४५ तब मध्यान्ह बाह्र बजेदेखि दिउँसो तीन बजेसम्म सारा देशभरि अन्धकार छायो। ४६ अनि दिउँसो तीन बजेतिर येशू यसो भन्दै ठूलो स्वरले कराउनुभयो: “एली, एली, लामा सबख्थनी?” जसको अर्थ हो, “हे मेरा परमेश्वर, हे मेरा परमेश्वर, तपाईंले मलाई किन त्याग्नुभयो?” ४७ यो सुनेर, वरपर बसिरहेका कसै-कसैले यसो भन्न लागे: “यो मानिसले एलियालाई बोलाउँदैछ।” ४८ तब तिनीहरूमध्ये एक जना तुरुन्तै दौडेर गयो अनि अमिलो दाखमद्यमा स्पन्ज चोपेर त्यसलाई नर्कटमा राख्यो अनि त्यसबाट उहाँलाई पिउन दियो। ४९ तर बाँकी अरूहरूले चाहिं यसो भने: “होस्, होस्! एलिया यसलाई बचाउन आउँछन्‌ कि आउँदैनन्‌, हेरौं न।” [[अर्को एक जना मानिसले भाला लिएर उहाँको कोखामा घोच्यो र त्यहाँबाट रगत र पानी निस्क्यो।]]* ५० अनि फेरि ठूलो स्वरले चिच्याएपछि येशूले अन्तिम सास* लिनुभयो। ५१ तब हेर, मन्दिरको पर्दा* टुप्पोदेखि फेदसम्म च्यातिएर दुई फ्याक भयो अनि भूकम्प भयो र ठूला-ठूला चट्टानहरूमा धाँजा फाट्यो। ५२ अनि चिहानहरू उघ्रिए र मृत्युको चिर निद्रामा परेका थुप्रै पवित्र जनको लास बाहिर निस्क्यो। ५३ अनि धेरैले ती देखे। (तब केही व्यक्तिहरू जो त्यतिखेर चिहानको आसपासमा थिए, तिनीहरू येशू पुनर्जीवित हुनुभएपछि पवित्र सहरभित्र पसे।) ५४ जब सैनिक अफिसर र तिनीसँगै येशूलाई पहरा दिने अरू मानिसहरूले भूकम्पका साथै अन्य घटनाहरू देखे, तब तिनीहरू असाध्यै डराए अनि यसो भने: “यिनी साँच्चै परमेश्वरका छोरा रहेछन्‌।” ५५ यसबाहेक येशूको सेवा-सुसार गर्न गालीलबाट उहासँगै आएका थुप्रै आइमाईले पनि टाढैबाट हेरिरहेका थिए। ५६ तिनीहरूमाझ मरियम मग्दलिनी, याकूब र योसीकी आमा मरियम, साथै याकूब र यूहन्नाकी आमा* पनि थिए। ५७ अरिमथियाका यूसुफ नाम गरेको एक जना धनी मानिस, जो येशूका चेला बनेका थिए, तिनी साँझ पर्नै लाग्दा ५८ पिलातसकहाँ गए अनि येशूको शव मागे र पिलातसले त्यो दिने हुकुम गरे। ५९ अनि यूसुफले उहाँको शवलाई सफा मलमलको कपडाले बेह्रे, ६० अनि चट्टान खोपेर बनाइएको आफ्नो नयाँ चिहानमा राखे। त्यसपछि ठूलो ढुङ्गा गुडाएर चिहानको ढोका बन्द गरे अनि त्यहाँबाट गए। ६१ तर मरियम मग्दलिनी र अर्की मरियम भने त्यहीं चिहानअगाडि बसिरहे। ६२ अर्को दिन अर्थात्‌ तयारीको दिनको* भोलिपल्ट मुख्य पुजारीहरू र फरिसीहरू पिलातसकहाँ भेला भएर ६३ यसो भने: “हजुर, त्यस ठगाहाले आफू जिउँदो छँदा ‘तीन दिनपछि म ब्यूँतनेछु’ भनेको हामीलाई याद छ। ६४ त्यसैले तेस्रो दिनसम्म त्यसको चिहानमा पहरा दिने हुकुम गर्नुहोस्। नत्र त, त्यसका चेलाहरू गएर त्यसको लास चोरेर लैजालान्‌ र ‘उहाँ मृत्युबाट ब्यूँतनुभयो’ भनेर मानिसहरूलाई भन्लान्‌। त्यसो भयो भने, त्यसको पछिल्लो ठगीले पुऱ्याउने नोक्सानी पहिलोको भन्दा चर्को हुनेछ।” ६५ पिलातसले तिनीहरूलाई भने: “तिमीहरू सिपाहीहरू लिएर जाओ र त्यसको सक्दो सुरक्षा गर।” ६६ तब तिनीहरू गए अनि ढुङ्गामा सिल लगाउनुका साथै पहरा राखेर चिहानको सुरक्षा गरे।
^ मत्ती २७:३२ * अतिरिक्त लेख ६ हेर्नुहोस्।
^ मत्ती २७:३४ * सम्भवतः यो एक किसिमको वनस्पतिबाट बनाइएको तीतो नशालु पदार्थ हुनुपर्छ।
^ मत्ती २७:४९ * मत्ती १६:३ को फुटनोट हेर्नुहोस्।
^ मत्ती २७:५० * ग्रीकमा न्युमा। अतिरिक्त लेख ७ख हेर्नुहोस्।
^ मत्ती २७:५१ * यो पर्दाले महापवित्रस्थान र पवित्रस्थानलाई छुट्याउँथ्यो।
^ मत्ती २७:५६ * शाब्दिक, “जब्दीका छोराहरूकी आमा।”
^ मत्ती २७:६२ * हप्तावारी विश्राम-दिनको अघिल्लो दिनलाई तयारीको दिन भनिन्छ। त्यस दिन यहूदीहरू विश्राम-दिनका लागि तयारी गर्थे